ओस्कार यात्रामा नेपाली चलचित्र | Namastefilmy.com| Nepali Cinema, News, Gossip ,Articles, Interview, Celebrity, Photo, Songs, Video, More...
Home >> Features >> ओस्कार यात्रामा नेपाली चलचित्र
ओस्कार यात्रामा नेपाली चलचित्र
काठमाडौं । भारतीय भूमिबाट नेपाली चलचित्र ‘सत्यहरिषचन्द्र’ बनेपछि नेपालमा नेपाली चलचित्र निर्माण शुरु भएको इतिहास छ । डिबि परियारले कोलकतामा २००७ सालमा बनाएको ‘सत्यहरिषचन्द्र’ २००८ सालमा काठमाडौंमा देखाइएको थियो । वि.सं. २०२० सालमा हिरासिंह खत्रीले बनाएको चलचित्र ‘आमा’ नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र हो ।
नेपाली भाषामा चलचित्र बन्न थालेको ६७ वर्ष भइसकेको छ । नेपाली भूमिमै चलचित्र निर्माण हुन थालेका ५५ वर्ष पुगे पनिनेपाली चलचित्रले अपेक्षित सफलता हात पर्न सकेका छैनन् । विश्व सिने जगतमा नेपाली चलचित्रले आफूलाई परिचित पनि गराउन सकेको छैन ।
नेपाली चलचित्रको उत्कृष्टता मापन गर्ने बलियो आधार ओस्कार अवार्डलाई मानिन्छ । यो अवार्डमा विश्वभरका चलचित्र सहभागी हुन पाउँछन् । नेपाली चलचित्र पनि ओस्कार अवार्डमा सहभागी हुँदै आएका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै पनि सफलता हात पार्न सकेका छैनन् ।
पहिलोपटक सन् १९९९ मा ७२ औं ओस्कार अवार्डमा सहभागी भएको ‘क्याराभान’ विदेशी भाषाको उत्कृष्ठ ५ चलचित्रको सूचीमा परेको थियो । यो नै अहिलेसम्म ओस्कारमा नेपाली चलचित्रले पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । त्यसयता ओस्कारमा सिफारिस भएका कुनै पनि नेपाली चलचित्रले सहभागिता जनाउने अवसरभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । यो चलचित्र पनि नेपाली निर्देशकले निर्देशन गरेका थिएनन् । फ्रेन्च निर्देशक एरिक भ्यालीले निर्देशन गरेको यो चलचित्रमा थिन्ले लोन्डुप लामा नायकका रुपमा थिए । भीरबाट लडेर वि.सं. २०७३ वैशाखमा लामाको मृत्यु भइसकेको छ ।
विश्वका चलचित्रकर्मीको सपनाका रुपमा रहेको ओस्कार अवार्डमा सहभागी हुने अर्को नेपाली चलचित्र ‘मुकुण्डो’ हो ।७३ औं ओस्कारमा सहभागी सन् २००० मा सहभागिता जनाएको यो चलचित्रले पनि सहभागी हुनेभन्दा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
छिरिङ रितार शेर्पाको निर्माण एवं निर्देशन रहेको यो चलचित्रको कथा तथा पटकथा केसाङ छेतेनले लेखेका थिए । बोक्सीप्रथामा आधारित चलचित्र ‘मुकुण्डो’ मा गौरी मल्ल, मिथिला शर्मा,रतन सुवेदीलगायतका कलाकार मुख्य भूमिकामा रहेका थिए ।
महाकवि लक्ष्मिप्रािद देवकोटाको खण्डकाव्य ‘मुनामदन’ ले पनि ७६ औं ओस्कार अवार्डमा सहभागिता जनाउने मौका पायो । सन् २००३ मा ओस्कारका लागि नेपालबाट सिफारिस भएको यो चलचित्रले पनि कमाल देखाउन सकेन । ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशन गरेको ‘मुनामदन’मा मिथिला शर्मा, शुभद्रा अधिकारी, नीर शाह, दीपक त्रिपाठी, उषा पौड्याललगायत कलाकारले अभिनय गरेका थिए ।
७९ औं ओस्कार अवार्डमा नेपाली चलचित्र ‘बसाईं’ले सहभागिता जनाउने अवसर पायो । सन् २००६ मा भएको यो ओस्कार अवार्ड पनि नेपाली चलचित्र उद्योगलाई खुसी दिलाउन सकेन ।
‘बसाईं’ प्रवासी साहित्यकार लीलबहादुर क्षेत्रीको उपन्यासमा आधारित चलचित्र हो । यसलाई सुभास गजुरेलले निर्देशन गरेका थिए ।
ओस्कार अवार्डको ८६ औं संस्करणमा सहभागी हुने मौका नेपाली चलचित्र ‘सुनगाभा’ ले पनि पायो । २०१३ मा भएको यो अवार्ड पनि नेपालीका लागि खुसी लिएर आउन सकेन । निशा अधिकारी, दिया मास्के र सौगात मल्ल मुख्य भूमिकामा रहेको यो चलचित्र सुवर्ण थापाले निर्देशन गरेका थिए । यो चलचित्र समलिंगी महिलाको विषयलाई लिएर बनाइएको थियो ।
यादव भट्टराईले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘झोला’ ले ८७ औं ओस्कार अवार्डमा सहभागी हुने अवसर पायो । २०१४ मा सहभागी भएको यो चलचित्रले पनि कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । कृष्ण धरावासीको कथामा आधारित चलचित्र ‘झोला’मा गरिमा पन्त, दीपक क्षेत्री, देशभक्त खनाललगायतका कलाकारलेअभिनय गरेका थिए ।
‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’
‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’ ओस्कार अवार्डको ८८औं संस्करणमा सहभागी भएको नेपाली चलचित्र हो ।
माओवादी–सरकार द्वन्द्वमा प्रभावित पात्रको विषयलाई उठान गरेको निश्चल बस्नेत निर्देशित चलचित्र ‘टलकजंग भर्सेज टुल्के’ले पनि सहभागिता जनाउने बाहेक अन्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । सन् २०१५ मा ओस्कारमा सहभागी चलचित्रमा दयाहाङ राई, ऋचा शर्मा, खगेन्द्र लामिछानेलगायतले अभिनय गरेका थिए ।
विश्वभरका चलचित्रकर्मीको महाकुम्भ ओस्कार अवार्डमा सहभागी हुने अवसर चलचित्र ‘कालो पोथी’ले पनि पायो । ओस्कारको ८९ औं श्रृखंलामा सन् २०१६ मा सहभागी भएको यो चलचित्रले अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हात पारे पनि ओस्कारमा भने कुनै पनि सफलता हात पार्न सकेन ।
मीन भामले निर्देशन गरेको चलचित्रमा खड्गराज नेपाली र शुक्रराज रोकाय मुख्य कलाकार थिए ।
ओस्कार अवार्डको ९० औं श्रृंखलामा नेपाली चलचित्र ‘सेतो सूर्य’ नेपालबाट सिफारिस भयो । सन् २०१७मा उक्त अवार्डमा सहभागिता जनाएको यो चलचित्रले पनि अन्य विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जिते पनि र दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेष्टिबलमा सहभागिता भएर विभिन्न विधामा अवार्ड जिते पनि ओस्कारले भने यसलाई पनि पत्याएन ।
दीपक रौनियारले निर्देशन गरेको चलचित्रमा दयाहाङ राई र रवीन्द्रसिंह बानियाँ मुख्य कलाकारका रुपमा रहेका थिए ।
नेपाली कथानक चलचित्र ‘पञ्चायत’ ले ओस्कारको ९१ औं संस्करणमा सहभागिता जनाउँदैछ । सन् २०१९ फेब्रुअरी २४ तारिखमा अमेरिकाको लसएन्जलसमा हुने अवार्डमा ‘पञ्चायत’ सहभागि हुनेछ ।
यो चलचित्रले सन् २०१७ मा सन् फ्रान्सिस्को इन्टरनेशनल न्यू कन्सेप्ट फिल्म फेष्टिवलमा वेस्ट फरेन ल्यांग्वेज फिचर र वेष्ट एक्ट्रेस अवार्ड जितेको थियो । ‘पञ्चायत’ ५ दशक अगाडिको पञ्चायती व्यवस्थाभित्रको सामाजिक संरचना र उक्त समयका किशोरीहरुको यौन मनोविज्ञानलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणलाई केन्द्रीय कथानक बनाएर निर्माण गरिएको चलचित्र हो ।
शिवम् अधिकारीले निर्देशन गरेको ‘पञ्चायत’ मा निता ढुङ्गाना र सरोज खनाल मुख्य कलाकारका रुपमा रहेका छन् ।
वि.सं. २०३४ सालमा प्रेमबहादुर बस्नेतले निर्देशन गरेको पहिलो नेपाली रंगीन चलचित्र ‘कुमारी’ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागि हुने पहिलो नेपाली चलचित्र हो । ‘कुमारी’ले तत्कालीन सोभियत संघको तासकन्द (अहिलेको उज्वेकिस्तान) मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिता जनाएको थियो । यो चलचित्रमा चैत्यदेवी र शैल्यान केसी मुख्य भूमिकामा छन् ।
‘कालो पोथी’, ‘सेतो सूर्य’ लगायतका थुप्रै चलचित्र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिता जनाएर विभिन्न विधामा अवार्डसमेत हात पारेका छन् । तर, ओस्कार अवार्डमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि अवार्ड हात पार्न सकेका छैनन् ।
अमेरिकाको एकेडेमी अफ मोसन पिक्चर आट्र्स एन्ड साइन्सेस (अम्पास) द्वारा मान्यताप्राप्त नेपाल छनोट समितिमा विमल पौडेलअध्यक्ष छन् भने लक्ष्मीनाथ शर्मा, प्रदीपकुमार उपाध्याय, राजेन्द्र शलभ, राजुविक्रम थापा, लोकेन्द्र पराजुली र सामीप्यराज तिमल्सेना सदस्य छन् । चिरञ्जीवी गुरागाईं सदस्यसचिव छन् । यो समितिले ओस्कारका लागि चलचित्र छनोट गरेर सिफारिस गर्छ ।
Previous: चलचित्र ‘ड्रिम गर्ल’ को अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
Next: ‘छक्का पञ्जा ३’ को प्रमोसनल गीतमा दीपाश्री , केदार, दीपक र जितुको र्याप (भिडियो)
अपर मुस्ताङ र लोअर मुस्ताङ पछि ‘भैरे’ युनिट स्याङ्गजाको सिरुबारी
‘झिग्राना’को ओरजिनल साउन्ड ट्रयाक गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )
निर्माताले दिएको गलत व्यापारिक रिपोर्टप्रति चलचित्र संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण